यिनै हुन् साहसी, हिम्मतवाली पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाईको न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घ टना को वास्तविकता के हो ? – Gazabkonews
यिनै हुन् साहसी, हिम्मतवाली पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाईको न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घ टना को वास्तविकता के हो ?
मोरङ । मोरगं उर्लावारीमा भएको घ ट नाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन ठूला मिडियाहरुले पनि चासो दिएका छन् । उर्लावारीमा करिब २ महिना अघि नि ध न भएका प्रविण वस्तोलाको घ ट ना थप रह स्य म भएको । उनको वहिनी सदिक्षा वास्तोला जसलाई पुजा भनेर पनि चिनिन्छ, उनले प्रहरी कार्यालयवाट गरेको लाइभ भिडियोमा प्रहरीले मिसिलमा नक्कली तस्बिर राखेको कुरा प्रसारण गरीदिएपछि अहिले सो घ ट ना चर्चामा आएको हो ।
प्रविणको वहिनी सदिक्षाले प्रहरीले मिसिल तयार पार्दा नै गलत तरिकाले तयार पारेको जनाएकी छन् । उनले मिसिलममा आफ्नो दाईको तस्बिर नभएर अरुकै तस्बिर राखेर मुद्दा कमजोर पार्ने कोशिष गरेको बताएकी छन् । उनले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा प्रहरीले आफुहरु माथि नै या त ना दिएको बताएकी छन् । उनले सक्कली मिसिल देखाउन आग्रह गरेको बताएकी छन् ।
उनले फोटोशपवाट अर्कै फोटो तयार पारेर मिसिलमा राखेको सदिक्षाको भनाई छ । उनले सक्कली फाइल माग गर्दै अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने पनि बताएकी छन् । उर्लावारी प्रहरीले सक्कली फाइल जिल्ला पठाइसकेको बताएपछि अब जिल्लामै गएर वास्तविकता के हो खोज्ने बताएकी छन् ।
प्रहरीले फाइलमै गलत प्रमाण राखेर आफ्नो दाईको ज्या न लिने हरुलाई प्रहरीले नै संरक्षण गरेको आरोप प्रवीणको वहिनीको भनाई छ । उनले सो घटनाका बारेमा प्रहरीले नै छा नविन समिति गठन समेत गरिएको भएपनि आफुलाई त्यस बारेमा थाहा नभएको बताएकी छन् ।